सेयर हाल्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् सेयरमा लगानी गर्ने विधिहरु - IAUA
सेयर हाल्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् सेयरमा लगानी गर्ने विधिहरु
ramkrishna December 22, 2016	सेयर हाल्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् सेयरमा लगानी गर्ने विधिहरु
यसरी किन्ने सेयर
Previous Previous post: कुन राशिलाई कुन व्यापार शुभ ? कुन बिषय रोज्दा ठीक ?
Next Next post: ‘सेयरमा लगानी गर्नेवित्तिकै प्रतिफल आउँदैन, धैर्य गर्नुपर्छ’